izingane Modern ngokwethukela kuhlonzwa ukuthi nginesifo ukubambezeleka zentuthuko yokukhuluma, ukwephulwa yalo ehlukahlukene yokubiza amagama noma kungekho nokukhuluma ukuthuthukiswa evamile apharathasi inkulumo. Ngokusobala, washintsha izindlela zokuxhumana izingane nabazali, kuncishiswe inani ukukhulumisana komuntu siqu, futhi luye lwaqinisa kungenzeka ukuthola ulwazi ngezindlela lobuchwepheshe: i-TV, i-computer, noma zingasebenzi emsakazweni. Kulokhu, izingane ungayiboni inqubo iphethini kwetinhlavu kanye umsindo pronunciation wakhe, ngakho ukuthuthukisa ikhono lokukhuluma bachitha isikhathi esingamaphesenti kunanini ngaphambili.
Ukuze inkulumo yentuthuko izingane zasenkulisa senzeka ngokuhambisana nemithetho, kufanele kube esikhathini bephethe ingane ukukhuluma ngakho, ukuba afunde ngokuzwakalayo kwansuku izinkondlo Rhythmic futhi bacule lullaby. kwengqondo wafakazela ukuthi ingane iqala ukuba ngiziqonde imisindo kusuka izinyanga ezine wokukhula kwengane esiswini, lokucula umama eba uhlelo lokuqondiswa kwakhe, upholisa, kudala isimo "inkhulumomphendvulwano", kodwa ngaphandle kwezwi ngenkambo ingane. Kid kungaba asabela ukunyakaza noma, kunalokho, ukupholisa ku iphimbo likanina. Ngaphezu kwalokho, wabeka nesilulumagama lesilinganiselwa, okuyinto esikhathini esizayo ngeke bathi futhi oyenza isebenze ukuthuthukiswa yokukhuluma izingane zasenkulisa ubudala lapho ama-apharathasi yabo vocal sekulungele ukukhuluma. Ake sihlole ngokuningiliziwe ngalokhu.
Ukuthuthukiswa kwezingane zasenkulisa yokukhuluma - eqhubekayo, ngakho ngemva abazali lokuzalwa bangahlanganyela emphakathini ngaphezu ezihambisana ukuxhumana kwayo ne-prigovorkami ingane mayelana wokuwasha, ecwaninga, + ihamba futhi senza uhambo. Basuke uphinyiswa ngokucacile. Umama Asondele phezu umntwana ukuze akwazi ukubona ubuso bakhe, izindebe, ulimi uma ukhuluma. Ungabona kanjani ingane namanje akukho imisindo uzama ukukopisha izindebe ukunyakaza kanina. Lokhu kunjalo ukuqeqeshwa inkulumo, eqinisa imisipha apharathasi vocal.
zokukhuluma kwezingane zasenkulisa yobudala okuqala ngegama elithi imidlalo lokuqala, lapho ezinyakazayo is kuhlangene izwi. Idlala "Kulungile", "amane-white emaceleni 'noma' umfana-umunwe" kusiza ukukhumbula incazelo yegama elithi, futhi ngokuvamile ukudlala umbhalo olusankondlo uyayisiza ingane nokuba phinde it lonke futhi ngokwezinga elikhulu. Umfutho yokubiza ingane iba imizwelo eyakhayo ukuthi uzizwa ngesikhathi game.
ukuthuthukiswa kolimi kwezingane zasenkulisa, kanye ngcono yayo kungaba ukulandela ngenani amagama akhulunyiwe ingane, kanye nekhono lakhe ukwakha imisho, imisho, lokubuza imibuzo eshukumisa ingqondo. Uma ingane lalisetshenziswa inkulumo elula yamagama, iminyaka ke eyodwa nengxenye 8-10 kuphela silulumagama ukukhuphuka 40, futhi ingane iqala ukubuza, ekhomba isihloko: "Kuyini lokhu?". Eminyakeni emithathu, silulumagama kwandisa ngokucijile futhi ifinyelela samazwi ayizinkulungwane, ukuthi kid kuze zonke kahle uthi, nemisindo ivame ukunganakwa noma ukuphazamiseka. Lapho eseneminyaka emihlanu preschooler ngokuvamile umemezela ngokucacile zonke ukuzwa imisindo yolimi lwabo lwendabuko futhi yakha imisho eyinkimbinkimbi yokukhuluma kwakhe kufana indzaba lemfisha, nolwazimagama ifinyelela 2,500 amagama umntwana angasebenzisa ezimweni ezahlukene, kanye tandziso.
ukuthuthukiswa Ulimi enkulisa akuyona nje izifundo uthisha ihlelwe, kodwa izingane wenhlanganyelo khulula lapho ukuhlela umdlalo abayitoho, ukudlala enkundleni yemidlalo. Ukuze uthole ngesisekelo imidlalo kanye dramatizations, ngaphezu kwakho konke, kukhethwe imisebenzi temdzabu: Tales indzaba lemfisha, pestushki ajwayelekile kusukela ebuntwaneni, lapho abazali ukudlala iminwe nezintende zezandla kid elula inganekwane "Gingerbread Man", "The Mansion", "Hen Ryaba "nabanye.
abantu amafomu Small - elula, Rhythmic futhi kuyaqondakala ezinganeni. Usisiza ngokobudala, bakhonza njengezikhonzi indlela ukuqonda futhi umsebenzi yokukhuluma. Zingasetshenziswa e uhla enkulu, futhi abazali nothisha nganoma isiphi isikhathi phakathi nesifundo belungiselela ubuthongo, lapho wenza imisebenzi yasekhaya.
Isimiso semfundo namuhla noma kanjani ilanga wanyamalala ngemuva amafu
Emuva esikoleni. impande kwalokho
IzAga ngokuphila - ikhono ukuqaphela Into esemqoka
Kuyini itiye ukudakwa?
Qigong: ngomzuzu 15-eziyinkimbinkimbi angathuthukisa futhi wenze umzimba enhle
Isitifiketi sezokwelapha kwabashayeli - isikhathi esisha